Top 10 kem nghệ trị sẹo hiệu quả, đáng dùng nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 kem nghệ trị sẹo hiệu quả, đáng dùng nhất | Muasalebang in Muasalebang
Isibazi yindawo yesikhumba epholile ngemva kokulimala. Izibazi aziyona ingozi emzimbeni womuntu, kodwa zenza isikhumba sibe sibi futhi ngezinye izikhathi sizizwa sinamahloni. Izibazi zinezinhlobo eziningi njengezibazi ze-keloid, izibazi ze-concave, … futhi uhlobo ngalunye lwesibazi luzoba nezindlela zalo zokwelapha kanye nokhilimu oyisibazi ukuze kuqinisekiswe ukuthi singaphela isibazi ngempumelelo kakhulu.
Nakuba ziningi izindlela zokwelapha isibazi namuhla, usebenzisa Ukhilimu omuncu Kuseyindlela esebenzayo yezibazi ezincane ezithenjwayo.
1 Iyini i-Scar Cream?
1.1 1. Decumar Ijeli Entsha Yokukhipha Izinduna
1.2 2. Ukhilimu we-Turmeric
1.3 3. I-Yoosun Turmeric Skin Cream
1.4 4. Izinduna Nghệ I-Turmeric Cream
1.5 5. I-Thorakao Turmeric Cream
1.6 6. I-Beaumore’s Turmeric Cream
1.7 7. I-Turmeric cream E100
1.8 8. Ijeli yeNacurgo
1.9 9. Leyna Thorakao Turmeric Cream Tub
1.10 10. Smom .I-Turmeric Cream
Iyini i-Scar Cream?
I-scar cream umkhiqizo owenziwe nge-turmeric oqeda ngokuphumelelayo izibazi esikhumbeni, okukusiza ukuba uqiniseke ngokwengeziwe empilweni.
1. Decumar Ijeli Entsha Yokukhipha Izinduna
I-Decumar New ingumkhiqizo wokuqala wejeli wokunciphisa izinduna kanye nokulawula uwoyela eVietnam
Izithako ze-Herbal. Iphephile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
I-Anti-inflammatory, antibacterial, inciphisa ngokushesha induna yokuvuvukala.
Vimbela futhi uqede izibazi ngemva kwezinduna ngempumelelo.
Ukuvuselelwa okusheshayo kokulimala kwesikhumba okushiywe yizinduna.
Inikeza umswakama esikhumbeni, igcina isikhumba sibushelelezi futhi sisha
I-Curcumin nano: Lena i-antibiotic yemvelo enemiphumela ye-antibacterial, esekela ukwelashwa kwama-acne, anti-infection, nokuvuselelwa okusheshayo kokulimala kwesikhumba. Ifomu le-nano elinobukhulu be-micro-molecular lisiza i-Curcumin ukuthi ingene ekujuleni kwesendlalelo sesikhumba ukuze ikhulise imiphumela yayo, isiza ukunciphisa ngokushesha ubukhulu be-acne kanye ne-acne ethelelekile, i-fade izibazi ngesikhathi esisheshayo.
– I-red onion essence: inomphumela wokuvimbela ukwakheka kwezibazi ze-concave
I-Vitamin E ne-Aloe Vera: I-moisturizing, ikhanyisa futhi i-anti-oxidant.
Xem Thêm Check legit là gì? Hướng dẫn check legit chuẩn nhất cho dân sneaker | Muasalebang
Vimbela induna (izinduna ukuvuvukala, induna, whiteheads, blackheads, cystic induna, …).
Ifiphalisa izindawo ezimnyama ezibangelwa izinduna, izibazi, isheshisa ukuvuselelwa kwesikhumba futhi ibuyisele isikhumba esonakele.
2. Ukhilimu we-Turmeric
I-Nano Silver Turmeric Cream Thai Duong Turmeric Cream isiza ukondla isikhumba, isize ukuphulukisa izibazi ngokushesha, inciphise futhi isize ekufipheleni kwamabala amnyama nokushintsha umbala.
Isetshenziselwa amacala: Ukulunywa omiyane, ukulunywa yizinambuzane, ukuqubuka kokushisa. Imihuzuko, isikhumba esomile esiqhekekile, i-melasma, ama-stretch marks ngemva kokuzalwa. Isikhumba esinezinduna, isikhumba esinokusha okuncane. Ukufaka isandla ekusizeni isikhumba siphole ngokushesha ngenxa yokulimala (Nge-vitiligo, umbandamu, i-chicken pox, ama-shingles, amanzi adla izandla nezinyawo…)
Ngezithako eziyinhloko ezihlanganisa i-turmeric essence, uvithamini E kanye nesiliva ye-Nano eyengeziwe, lo khilimu unomphumela ophumelela kakhulu we-antiseptic kanye ne-acne, uthuthukisa ukuvuselelwa kwamangqamuzana esikhumba amasha, futhi uphulukisa isikhumba. Ngaphandle kwalokho, i-Thai Duong turmeric cream nayo inamandla okwelapha ukulunywa omiyane, ukulunywa yizinambuzane, ukuqubuka kokushisa; Isetshenziselwa imihuzuko yesikhumba, ukushiswa kwesikhumba, i-chickenpox, ama-shingles, ama-ringworm, ama-ringworm, isikhumba esomile esiqhekekile, amanzi ezandla nezinyawo, njll., ngakho-ke yethenjwa abantu abaningi, kuhlanganise nabantu abadala kanye nezingane.
3. I-Yoosun Turmeric Skin Cream
Iphunga nokunakekelwa kwesikhumba Isikhumba esipholile, esithambile futhi esibushelelezi. Vimbela izinduna. Iqeda izibazi zezinduna
Geza, sula isikhumba esizothinteka, sebenzisa inani elanele lekhilimu, izikhathi ezingu-2-3 ngosuku
I-Yoosun turmeric acne cream ikhiqizwa uhlobo lokuqala lwe-Vietnamese Yoosun, ngakho intengo ishibhile kakhulu. Cishe kuphela i-VND engu-20,000 kuya ku-30,000 VND ye-20g tube ye-acne cream. Ukhilimu unomphumela wokondla isikhumba, ugcine isikhumba sifudumele, sithambile, sikhanya ngokwemvelo, amabala amnyama afiphalayo, izibazi, ama-stretch marks, isikhumba esiqhekekile, ukuvikela ilanga …
– Vimbela futhi unciphise izinduna, izinduna, izinduna, izinduna, ezisetshenziswa lapho ukulunywa yizinambuzane, ukusha esikhumbeni esincane, isikhumba esinwabuzelayo, ukuqubuka kokushisa, ukuqubuka kwenabukeni…
4. Izinduna Nghệ I-Turmeric Cream
Ijeli ingena ngokushesha esikhumbeni ngaphandle kokushiya amamaki, ingasetshenziswa phezu kwezimonyo. I-Acnes Scar Care ine-asidi ebuthakathaka, ayicasuli isikhumba, ayinambala, ayinawo amafutha amaminerali, ayinayo i-acnegenic futhi ayiyona i-allergenic. Inkimbinkimbi yamaVithamini C, E, B6 kanye ne-Turmeric Essence: Ukufiphala kwesibazi: Ukuthuthukisa inqubo.vuselela amaseli awonakele. okubangelwa izinduna, kusiza ukuqinisa i-collagen kanye ne-elastin fiber structure. Imivimbo efiphalayo: Isiza ukulwa ne-oxidation, ivimbele ukwakheka futhi ibhubhise ama-melanin pigments akhiqizwayo I-Salicylic Acid & Isopropylmethylphenol: Ivimbela ukwakheka kwezinduna ezintsha. Lungisa i-stratum corneum, unclog pores, induna elwa namagciwane
Ukulimala okuqhubekayo okubangelwa induna kuzoshiya izibazi namabala amnyama okunzima ukuwaqeda. I-Acnes Scar Care enefomula ethuthukisiwe, eyenza ngokugcwele i-Vitamin + Turmeric complex ukusiza ukuqeda izibazi, ukunciphisa ngokushesha izinduna.
Inkimbinkimbi yamavithamini C, E, B6 kanye ne-turmeric essence: Isebenza kahle ezibazini ezifiphalayo, amabala amnyama afiphalayo.
Yakhelwe ngokukhethekile isikhumba esilimele induna. Amafutha amaminerali angenawo, angacasuli, ane-asidi ebuthakathaka.
5. I-Thorakao Turmeric Cream
I-Thorakao Turmeric Cream 7g Emnene
Ingemuva eliphuzi elikhilimu kanye ne-flavour ye-turmeric ephawulekayoC
Ngemiphumela evelele ekunakekelweni kwesikhumba
Umkhiqizo uqinisekisiwe ukuze ukwenze waneliseke.
Igama Brand: Thorakao
Umsuka: Vietnam – 100% Genuine
Ukwesekwa okuhle kwezinduna, izibazi, isikhumba esimnyama, esifiphele
Isizinda se-Turmeric yemvelo
Isiza ukuvikela izinduna
Yehlisa amabala amnyama futhi uthuthukise izibazi zesikhumba
Ishiya isikhumba sithambile futhi sigqamile
I-Thorakao iwuphawu oselulawule imakethe yaseVietnam amashumi eminyaka, eyaziwa ngemikhiqizo yalo yokunakekelwa kwezempilo nobuhle ekhishwa emvelweni, eseduze, ephephile futhi esebenza ngempumelelo kakhulu kubantu.
6. I-Beaumore’s Turmeric Cream
I-Beaumore Turmeric Cream
Igama Brand: BeauMore
Ezifundweni, kuboniswe ukuthi: isizathu sokuthi i-turmeric inomphumela wokusiza ukuphulukisa ngokushesha amanxeba, ukwelapha amabala amnyama, ukwelapha izibazi, nokuhlobisa isikhumba ngokuphumelelayo kungenxa yokuthi i-turmeric iqukethe isithako esisebenzayo i-curcumin. Isithako esisebenzayo i-curcumin sinomphumela wokuqeda amabala amnyama, izibazi zokuphulukisa, nokuhlobisa isikhumba ngokusebenza kahle okuphezulu ngesikhathi esifushane. I-Beaumore Turmeric Cream ikhishwa ku-turmeric essence namavithamini (A & E) ukwengeza amandla kumaseli esikhumba, ingene ijule futhi ikhuthaze ukukhula kwamangqamuzana esikhumba amasha.
I-Beaumore Turmeric Cream isiza ukuvimbela ukwakheka kwama-bran acne, amakhanda amhlophe omile, ukususa amakhanda amnyama, ukunciphisa ukuvuvukala kwamakhanda abomvu (izinduna). Incibilikisa izibazi ezimnyama ezishiywe izinduna nezibazi. Khiqiza amaseli esikhumba amasha futhi wenze isikhumba sibushelelezi.
Ukhilimu uqukethe i-turmeric essence namavithamini, ngakho-ke i-benign kakhulu, ngakho iphephile esikhumbeni, ayibangeli ukucasuka, futhi ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
7. I-Turmeric cream E100
Yondla futhi ithambisa isikhumba ukuze sigcine isikhumba sibushelelezi futhi sigqamile.
Lungisa induna ngaphandle kokushiya izibazi nemihuzuko, phulukisa amanxeba adonse isikhumba esincane
Nciphisa isikhumba esiqhekekile ngenxa yesimo sezulu
Ipholisa ukulunywa omiyane, isikhumba esiklwebhekile, isikhumba esomile esiqhekekile, amanzi ezinyaweni…
Izithako kanye nokusetshenziswa:
– Isithako esiyinhloko sikakhilimu i-turmeric entsha, ekhiqizwa inqubo evaliwe ukuletha ukusebenza kahle okuphelele kumsebenzisi.
– Ngesikhumba esinamabala amnyama, i-melasma … ukhilimu we-turmeric uzokusiza ukuthi ususe amangqamuzana afile, ulethe isikhumba esisha, esinamandla.
– Imikhiqizo ipakishwe kahle, iqinisekisa ukuphepha ngokuya ngamazinga omhlaba.
– Idizayini ehlangene, kulula ukuyiphatha, ilungele ukusetshenziswa.
– Inomsebenzi wokukhipha amaseli afile, ikusiza ukuthi uthole isikhumba esimhlophe esikhanyayo.
Ukhilimu we-Turmeric unamandla okuqeda amanxeba nokuphulukisa izibazi ngempumelelo kakhulu.
– Ukhilimu usiza ukuvikela isikhumba esiqhekekile, isikhumba esomile, namanzi onyawo ngempumelelo.
Ukhilimu we-Turmeric usiza ukuthuthukisa ukulunywa omiyane ukuze ungakhathazeki ngokuqubuka kwesikhumba ngenxa yomiyane noma ukulunywa yizinambuzane.
Iqukethe izithako eziningi ze-Vitamin E, esiza isikhumba ukuthi simelane nezinto eziyingozi ezivela ngaphandle.
– Umkhiqizo awunazo izinto eziyingozi, ukucasuka kwesikhumba futhi ungasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
8. Ijeli yeNacurgo
Indlela yokwenza kanye nezinzuzo:
I-Nacurgo Gel inomphumela wokuvimbela ukukhiqizwa nokubhujiswa kwe-melanin, ngaleyo ndlela, ukufiphaza izibazi ezindala ezishiywe yizinduna, futhi ngesikhathi esifanayo ukuvimbela ukwakheka kwezibazi ezintsha esikhumbeni esithandwa yizinduna, kunikeza isikhumba umbala okhanyayo.
I-Nacurgo Gel ithambisa ukwakheka kwezicubu zezibazi, ivimbele ukwakheka kwe-collagen ukusiza ukucaba izibazi ezintsha, ishwabane izibazi ezindala.
Inikeza umswakama esikhumbeni, ama-anti-oxidants ukusiza ukondla isikhumba, ukuvimbela izinduna
Emivimbo – izibazi zezinduna: Faka ungqimba oluncane lwe-Nacurgo Gel esikhumbeni esimnyama – izibazi zezinduna, gcoba ngokulinganayo kuze kungene ijeli ukuze kufiphale amabala amnyama – izibazi.
Kuzo zonke izinhlobo zezinduna, amakhanda amhlophe, ama-blackheads noma ama-cystic acne, noma ngemva kokukhama induna: Gcoba i-Nacurgo Gel ngokulinganayo phezu kwesikhumba esinezinduna ukuze usize induna iphole ngokushesha futhi ikakhulukazi uvimbele ukwakheka kwamabala amnyama – izibazi ngemva kokuba induna isiphelile.
Uma kwenzeka isilonda sishiya isibazi esidala esomile: gcoba i-Nacurgo Gel esibazini bese usebenzisa ibhandeshi le-gauze ukusivala ubusuku bonke.
9. Leyna Thorakao Turmeric Cream Tub
Ivimbela izinhlobo ezahlukene zezinduna.
Ifiphalisa amabala amnyama, izibazi, isiza ukuvuselelwa kwesikhumba.
Ishiya isikhumba sithambile futhi simanzi
Isikhumba esishintshayo, isikhumba esibushelelezi
I-Leyna Thorakao Turmeric Cream (25g) iwumkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba nobuhle oneziqephu zemvelo ze-turmeric, okusiza ukuqeda izibazi, ukuvikela izinduna, ukukunikeza isikhumba esihle semvelo esimhlophe, akukho ukucasuka. .
I-Turmeric isitshalo semvelo esinesikhathi eside sikhona futhi sisetshenziswa kakhulu emlandweni we-Vietnamese.
Ngezici eziningi ezinhle, i-turmeric isetshenziswa abantu baseVietnam njengesinongo ekudleni, umuthi wokusekela ukuphulukiswa,
Ngaphandle kwalokho, i-turmeric iphinde isetshenziswe ekulungiseleleni ukunakekelwa kwesikhumba ngenxa yezakhiwo zayo ze-antioxidant, anti-inflammatory kanye ne-anti-aging.
Imikhiqizo phakathi neminyaka yocwaningo nokuhlolwa komtholampilo, enezithako ezikhishwe kuwoyela obalulekile we-turmeric, isiza ukwenza mhlophe isikhumba, iphele izibazi futhi ivimbele izinduna.
Ngefomula ethambile nokumuncwa okusheshayo, umkhiqizo ukunika umuzwa omnandi, onganamafutha, olumelayo uma usetshenziswa.
Ukhilimu ungumkhiqizo ophephile wesikhumba, ofakwe ebhokisini elihlangene, elicophelelayo, ukuze ukwazi ukuhamba nalo kalula noma kuphi.
10. Smom .I-Turmeric Cream
Isiza ekwelapheni i-melasma, ama-freckles… ngempumelelo kakhudlwana.
Isekela ukwelashwa kwezinduna futhi ivimbela izibazi ezimnyama ezishiywe yizinduna.
Isiza ukupholisa ngokushesha izilonda.
Vimbela futhi uvimbele ukuguga kwesikhumba
Yenza mhlophe futhi ukhanyise isikhumba ngokwemvelo
Susa imibimbi ebusweni
Isiza ukucekela phansi kanye nokukhipha amaseli esikhumba afile
kokubili ngesikhathi sokukhulelwa nangemva kokubeletha
Ngemva kokukhulelwa okunzima futhi okunzima, usuku selufikile lapho omama abakhulelwe bengabamba “umvuzo” wabo ezandleni zabo. Ukuze athole lowo “mvuzo” onuka ubisi, umama kufanele ahwebe ngezinto eziningi: ubusha obungenazinkathazo, izici zobusha, ukubukeka komzimba okuhlanzekile, nesikhumba esibushelelezi nesisha. Ingabe ukhona owabelana ngalokho nomama abancelisayo?
Ngokuqonda lokho, i-SMOM isikhiqize imikhiqizo yokunakekela abesifazane abakhulelwe ngemva kokubeletha ngisho nalapho bekhulelwe. Ikakhulukazi i-SMOM Face Cream ithenjwa futhi ithandwa omama abaningi
Ngenhla kunohlu lwemikhiqizo eyi-10 emayelana nokhilimu oyisibazi okufanele isetshenziswe kakhulu. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa nokuhlola, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.
Cách phát Wifi từ IPhone đúng cách, bạn đã biết chưa | Muasalebang